၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် တရုတ်မှ ဥရောပသို့ မီးရထားဖြင့် ကုန်စည်တင်ပို့မှု မြင့်တက်မည် - Yangon Media Group
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် တရုတ်မှ ဥရောပသို့ မီးရထားဖြင့် ကုန်စည်တင်ပို့မှု မြင့်တက်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့နှင့် ဥရောပတို့အကြားရှိ ချိတ်ဆက်ထားသော မီးရထားလမ်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မီးရထားဖြင့် ကုန်စည်တင်ပို့မှုအရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း ၃ဝ တိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်လင့်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မှ ဥရောပသို့ ကုန်တင်မီးရထား ၅ဝဝ ခန့် သွားရောက်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ကုန်တင်မီးရထား ၃၇၇ စီးရှိ ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ကုန်တင်မီးရထားများ၌ ကုန်သေတ္တာ ၃၄ဝဝဝ ခန့် တင်ဆောင်သွားမည်ဟု ဝူဟန်ဥရောပ မီးရထားသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူတို့က ပြောကြားခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်သူတို့က ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းများသာမက နိုင်ငံ၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ စင်ကျန်းနှင့် ဂွမ် ဒေါင်းတို့မှ ကုန်စည်များကိုပါ တင်ပို့သွားနိုင်ရန် မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။ ကုန်စည်တင်ပို့မှုကို ဆောင်ရွက်နေသည့် Internatioanal Logistics ကုမ္ပဏီက ဝူဟန်မှ ယူကရိန်း၊ တူရကီ နှင့် အီရန်နိုင်ငံများသို့လည်း မီးရထားလမ်း ကြောင်းသစ်များ ဖွင့်လှစ်ရန် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူကြိုက်အများဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ် အသင်းဖြစ်
Walgreens က ရက်လွန် အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးများအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၂၅ သန်း အလျော်ပေးမည်
မူဆယ်မြို့မ ရဲစခန်း အချုပ်ဆောင်တွင် အချုပ်သားများ ထွက်ပြေးစဉ် သေနတ်ဖြင့် ခြောက်လှန့် ပစ်ခ??
ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်း ရေကြီး ၁၉ ဦးသေ၊ ၁၁ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
၂၅ နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆုံးဖြတ်ချက် အမှား မခ?
ထောင်တွင်းလူဦးရေ ကျပ်တည်းမှု လျှော့ချနိုင်ရေး အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်